Alqaacida oo siideynta nin mareykan ah ku xiray in lajoojiyo Duqeynta logeysto Somalia – SBC
Alqaacida oo siideynta nin mareykan ah ku xiray in lajoojiyo Duqeynta logeysto Somalia
Filim Muuqaal ah oo la soo geliyay bar internet oo ay Alqaacida isticmaasho ayaa waxaa ka soo dhex muuqday Hogaamiyaha Shabakada Alqaacida Dr Ayman al-Zawahri kaasi oo uu ku qiray in ay Alqaacida gacanta ku hayaan Mr. Warren Weinstein oo ah 70 jir u dhashay wadanka mareykanka kaasi oo ay siideyntiisa ku xireen shuruudo kala duwnan oo dhowr ah .
Dr Ayman ayaa sheegay in siideynta ninkan ay ku xiran tahay in dowlada mareykanka ay joojiso duqeymaha ay ka geysaneyso Dalal uu ku jiro wadanka Soomaaliya sida wadama Afghanistan, Pakistan iyo Yemen.
Dhinaca kale Al-Zawahri ayaa dalabkiis ku daray in la sii daayo kooxaha Alqaacida iyo Taalibaan ee ku xiran Wadamada Caalamka oo dhan.
Wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Dowlada Mareykanka iyo Pakistan oo ku aadan inay rumeysan yihiin alqaacida ay haysto Muwaadinka Mareykanka ah ee laga afduubtay Magaalada Lahore bishii August 13keedii isla sannadkan 2011.
Mr. Warren Weinstein oo iminka Alqaacida ay sheegtay inuu gacanta ugu jiro ayaa horey dowlada Mareykanka waxay tuhun uga qabtay inay haystaan kooxaha islaamiyiinta ah laakiin si dhab ah looma shaacin cida sida rasmiga ah u haysta.
Warka ka soo baxay Alqaacida ayaa waxaa uu imanaayaa xilli dalka Soomaaliya Deegaano ka tirsan ay ka dhaceen duqeymo kala duwan kuwaasi oo ay geeysteen diyaaradaha Duuliye la’aanta ee reer galbeedka iyaga oo beegsi ku haya Xarakada alshabaab oo lagu xiriiriyo inay xiriir dhow la leedahay wax loogu yeeray Aargagaxisada caalamiga ah taasi oo muujineysa in Alqaacida ay ka soo horjeedo duqeymaha caynkaas ah.
Filimka hogaamiyaha alqaacida ayaa u duubnaa 30 daqiiqo kaasi oo ahaa sawirka Al-zawahiri oo la saaray cod kaasi oo lahaa sumada Alqaacida filimaanta ay soo duubta la saaro
C/laahi gaacuur says:
Aniga waan necbahay maraykanka